नेप्सेमा दोहोरा अंकको गिरावट, २ अर्ब बढीको कारोबार - सिम्रिक खबर
नेप्सेमा दोहोरा अंकको गिरावट, २ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १३ दशमलव ३७ अंकले घटेर १ हजार ५७६ दशमलव २७ विन्दुमा झरेको छ । १९३ कम्पनीको २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । ९२ लाख ८१ हजार ४७८ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । फाइनान्स बाहेक अरु समूहका सूचक घटेका छन् । निर्जीवन बिमा समूह सबैभन्दा धेरै ८६.३७ अंकले तल झरेको छ । वाणिज्य बैंक समूहको सूचक १०.५ अंकले घटेको छ । आइसीएफसी फाइनान्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै ९.८२% ले कमाएका छन् । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा अपि हाइड्रोपावरका लगानीकर्ता छन् । यसको भाउ ७.१४% ले घटेको छ । खरिदबिक्री रकममा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले अग्रता कायम गरेको छ । यसको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।
यो दिन कारोबार खुलेको दुई मिनेटमै बजार १ हजार ५९४ दशमलव ३६ विन्दुमा पुगेको थियो । आइतवार कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रू. १० करोड ६ लाख ८५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १५ ले बढेर रू. १ हजार ३८६ कायम भएको छ । उक्त कम्पनीको आइतवार ७२ हजार ४१३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।